Isango lokuya e-LAKE TAHOE-Wamkelekile KUPHELA INDAWO - I-Airbnb
Isango lokuya e-LAKE TAHOE-Wamkelekile KUPHELA INDAWO
Igumbi elinomnyango ophumela ngaphandle yonke sinombuki zindwendwe onguScott
I-Queen bed kwigumbi lokulala ilala i-2 kunye ne-queen sofa ibhedi kwigumbi lokuhlala 2 ngaphezulu. Yonwabela eyona skiing inomtsalane, ukukhwela intaba, ukukhwela inqanawa, ukukhwela ibhayisekile entabeni, iimbono ezibukekayo, ukuhamba ngesikhephe, nokunye okuninzi. Indawo kuphela yimizuzu engama-20 ukusuka eLake Tahoe eyaziwayo kwihlabathi. Olu hlaziyo lucocekile kwaye luhonjiswe ngoncasa lunika ithuba lokugqibela lokuphumla nekhitshi lakho, igumbi lokuhlala, igumbi lokulala kunye negumbi lokuhlambela. Imizuzu evela kwiTrader Joe's, In-N-Out, Chipotle, Costco, kunye nabanye abaninzi. Intlawulo eyongezelelweyo yeendwendwe ezongezelelweyo
Le kota yendwendwe esanda kwakhiwa i-800 sqft inekhitshi langoku elineekhabhathi ezintle ze-Espresso kunye ne-granite countertops- izitya, i-cutlery, umenzi wekofu, ifriji, kunye ne-oven microwave. Unayo yonke indawo. Indawo yokuhlala inomabonakude wescreen esicaba kunye neApple TV. Ibhedi yakho yiNombolo yokuLala kaKumkanikazi ngokuKhetha iNtuthuzelo ukuze wena kunye neqabane lakho nilungelelanise ukuqina kokhetho lwakho. Ukwanawo nomoya osembindini kunye nobushushu nge-thermostat yakho.
Sikufuphi nesango lokungena kweyona ndlela ingcono yeentaba ukuya eChibini ukuba uvela kwisikhululo seenqwelomoya saseReno-Tahoe. I-Spooner Summit Pass kuphela kweHwy eyahluliweyo ekhokelela eChibini. Le yindawo eyodwa yoMntla Nevada kuba ikufuphi nesixeko saseVirginia apho iGold Rush eyimbali yenzeka khona ngeminyaka yoo-1800. Ungandwendwela iMyuziyam yaseNevada State enendawo yemali endala kwiCarson City. Iidola ezingama-20 zegolide zenziwa apha kwaye zifunwa ngabaqokeleli kwihlabathi liphela. Iidola zesilivere zokwenyani zenziwa apha kwiminyaka emininzi eyadlulayo. Unokwenza i-short drive ukuya kwisiXeko saseVirginia esele inqabile kunye nomfanekiso wokwenyani we "Old West". Ukhenketho lunikezelwa kwimigodi yegolide yembali kwaye unokuhamba kwiindlela zokwenyani "zebhodi" ecaleni kwezakhiwo zezitena zakudala. Qhuba iiyure ezi-2 & 1/2 emazantsi kwaye uya kufumana eyona dolophu imangalisayo ye-Ghost ebizwa ngokuba yiBodie, eCalifornia ukusuka kwintshona yakudala. Igcinwe ngokugqibeleleyo kwaye inika umdla ngendlela emangalisayo. Eyona nto ibalaseleyo yethu yiLake Tahoe. Thatha usuku kwaye uqhube yonke indlela ejikeleze kuyo ukwenza ixesha lokujonga ubuhle beSand Harbor, kunye nobuhle be-Emerald Bay. Unokuphinda uthathe uhambo lwe-Mississippi paddleboat kunye nesidlo sasemini okanye isidlo sakusihlwa kwiLake okanye ukhwele i-gondola ukusuka "kwi-Gondola Village" ukuya phezulu kwi-Heavenly Valley ene-skiing ebusika okanye imisebenzi yasehlotyeni kwinqanaba lokuphakama kwe-10,000.
Siguquguquka kwaye siyavuya ukukucebisa malunga nezinto onokuthi uzenze kwindawo ekufutshane.